Iinkonzo Zomthetho Zaseburhulumenteni zasePrairie Zilungiselela i-Surge Surge - Iinkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wasePrairie
Iinkonzo Zomthetho Zaseburhulumenteni zasePrairie zilungiselela ukunyuka kokukhutshwa
by Iinkonzo Zomthetho Zaseburhulumenteni | Oct 8, 2021 | Iindaba zamva nje kunye namaNqaku, Akohlulwanga
Ukunqunyanyiswa kokugxothwa e-Illinois kuphele ngeCawa, nge-3 ka-Okthobha ka-2021. IPrairie State Legal Services sele ibona inani lamatyala okukhutshwa enyuka. NgokweOfisi yeGqwetha Jikelele laseMelika, amanani kulindeleke ukuba "aphindaphinde ukuphindaphinda amanqanaba abo obhubhane." I-pre-COVID, uPeoria sele enelinye lawona manqanaba aphezulu okugxothwa elizweni.
Ukufikelela ngokulinganayo kubulungisa nokuba umntu unayiphi imvelaphi okanye inqanaba lomvuzo yenye yezona njongo ziphambili zomsebenzi wezomthetho. Iinkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wePrairie zilungiselelwe kwaye zikulungele ukusebenzela uluntu lwethu ngexesha lokukhutshwa kwabantu ukuqinisekisa ukufikelela ngokulinganayo kwezomthetho.
I-Prairie State ijolise kwimizamo yayo yokuyekisa ukufundisa uluntu, iqabane kunye neearhente ezininzi ezinikezela ngoncedo, kunye nokunceda abaqeshi kunye nabanini mhlaba ukuba banxibelelane nolo ncedo. Izibonelelo zisafumaneka kubanini mhlaba nakwabaqeshi. Eyona ndlela isebenzayo kubantu base Peoria ukuba banxibelelane noncedo olulungele iimfuno zabo ngokubiza u-2-1-1 (309-999-4029) okanye ngokundwendwela www. 211hoi.org.
Okwangoku, kukho inkqubo yoncedo yokurenta esekwe kurhulumente enokuthi ihlawule ukuya kwiinyanga ezili-15 zokurenta. Esi sisicelo esidibeneyo, esiqaliswe ngumqeshi kwaye sagqitywa ngumnini-mhlaba. Olunye ulwazi lunokufumaneka kwi ilrpp.ihda.org okanye ngokutsalela umnxeba ku-866-454-3571.
Uncedo lwabaqeshi luyafumaneka nakwimibutho eliqela yasekuhlaleni efana ne-Phoenix CDS, Salvation Army, PCCEO, St Vincent de Paul phakathi kwezinye ezinoncedo lokunceda ukuthintela ukukhutshwa ezindlwini, kodwa kwanoncedo lwabantu abasele bekhutshiwe. Uncedo lwe-Illinois Family Families lwenza ukuba kube lula kwaye kukhawuleze abantu ukuba baqalise inkqubo yokwenza isicelo soncedo olukhethiweyo. Olunye ulwazi luyafumaneka kwi www.helpillinoisfamilies.com. Okokugqibela, iPrairie State ibonelela ngezixhobo ezinje ngeSimahla iRenteers's Handbook kunye ne-Toolkit Toolkit kwiwebhusayithi yethu, www.lungeloye.org.
Kubanini mhlaba kunye nabanini bamakhaya, kuyakubakho imali ebonakalayo ekhoyo ukukhusela ukulahleka kwezindlu ngenxa yelahleko yengeniso. Ulwazi ngale nkqubo izayo luya kufumaneka ku-www.ihda.org/haf. Ukongeza, uninzi lwemali mboleko ineendlela ezahlukeneyo zoncedo, kubandakanya iinkqubo zokuhlengahlengiswa kunye neenkqubo zokunyamezela. Ukuze ufunde okungakumbi, abanini mhlaba kunye nabanini bamakhaya banokundwendwela www.consumerfinance.gov/coronavirus/mortgage-and-housing-assistance.
Ukufumana iingcebiso malunga nokukhutshwa, abanini mhlaba kunye nabaqeshi bangaqhagamshelana neExiction Help Illinois ngokutsalela umnxeba ku-855-631-0811, uthumela umyalezo othi "Uncedo lokuGxotha" ku-1-844-938-4280, okanye undwendwele www.evictionhelpillinois.org. Uncedo lokukhutshwa e-Illinois lunokunika uncedo lwezomthetho simahla, iinkonzo zokulamla, kunye nokunxibelelana nolunye uncedo. I-Prairie State liqabane elisebenzayo kule nkqubo kwaye abaqeshi bommandla wasePeoria baya kuthunyelwa kwiofisi yethu ngoncedo lwezomthetho.
Kwababoneleli beenkonzo, iPrairie State iyaqhubeka nokubonelela ngenkqubo yokuhanjiswa okucwangcisiweyo ngokukhawuleza ukukhusela ukufaneleka kunye nokudibanisa abathengi bakho negqwetha lezindlu. Sikwafumaneka ngokulula ukuba sixoxe ngendlela imibutho yethu enokusebenzisana ngayo ukufezekisa iinjongo ezifanayo kunye nokubonelela ngoqeqesho kubasebenzi bakho kwimicimbi yezindlu njengokukhutshwa, izindlu ezifanelekileyo, okanye ukuhlala.
Amagqwetha, iPrairie State iphuhlise inkqubo enamandla ye-pro bono yokujongana ngqo nokukhutshwa kwabantu. Ukuba uligqwetha kwaye ungathanda ukuba livolontiya, nceda uqwalasele ukujoyina le projekthi. Yenzelwe ukulingana ishedyuli yakho kwaye ibandakanya ukucebisa abathengi kwifowuni. I-Prairie State ibonelela ngoqeqesho kunye nokubonelela ngokungasebenzi gwenxa.
Isebe lasePeoria lePrairie State landise iProjekthi yeNkundla yokuKhutshwa kwiNkundla yokuGxotha ukuba ibandakanye amagqwetha amabini kuwo onke amanxeba ePeoria County naseTazewell County. Siyacebisa abaqeshi ngamalungelo abo, uxanduva lwabo, kunye nezinto abanokukhetha kuzo kwinkundla yokukhutshwa kwindawo yokuqala yokubonelela kwaye banokubonelela nangabameli. Abantu banokufaka izicelo zeenkonzo zomthetho ngaphambi kwexesha ngokutsalela umnxeba kwi-309-674-9831, ngoMvulo ukuya ngoLwesine, nge-9 kusasa ukuya kwi-1 PM okanye kwi-Intanethi www.lungeloye.org.
 Ukukhutshwa kweendaba, UMerrick B. Garland, iGqwetha Jikelele (nge-30 ka-Agasti 2021), https://www.justice.gov/ag/page/file/1428626/download
 Ukwahlulahlula iZikhundla, Ilebhu yokugxotha, https://evictionlab.org/rankings/ (utyelelwe okokugqibela ngo-Okthobha 8, 2021)
/ s / UBritta J. Johnson
UBritta J. Johnson
USihlalo weQela loMthetho wezeZindlu
Iinkonzo Zomthetho Zaseburhulumenteni ZasePrairie, Inc.
I-411 Hamilton Blvd, Ste 1812
UPeoria, IL 61602
/ s / uDenise E. Conklin
UDenise E. Conklin
"Akunakwenzeka ukuba uthande ubulungisa kwabanye abantu kwaye ungakhethi ubulungisa kubo bonke abantu." -UMartin Luther King Omnci.	... Bona OkuninziJonga ngaphantsi